Dowladda Kenya oo laga doonayo in ay shaaciso Tirada Askartii looga dilay Weerarkii Ceel-cade | SAHAN ONLINE
Dowladda Kenya oo laga doonayo in ay shaaciso Tirada Askartii looga dilay Weerarkii Ceel-cade
NAIROBI – Weerarkii Ceel-cade hal sano ayaa kasoo wareegtay ,waxaana weerarkaas ay Al-Shabaab ku dishay Askar ka tirsan ciidamada milateriga dalka Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Weerarkaas ayaa noqday kii ugu weynaa ee lagu qaado ciidamada Kenya ee ku howlgala magaca AMISOM ,waxayna Al-Shabaab sheegatay iney ku dishay tiro ka Ibadan 200 oo askari oo ay ku jiraan Saraakiil xilal sarsare ka hayey hawlgalka.
Weerarkaas oo khasaarihiisa ilaa hadda muran ku jiro ayaa dhacay bishii January ee sanadkii 2016-ka ,waxaana dowladda Kenya illaa hadda aysan siin jawaab ku filan qoysaska askarta looga laayey weerarkaas.
Weerarka kadib ayaa warbixino soo baxayey ay sheegeen in deegaanka Ceel-cafe ay ku awood badan yihiin beesha Mareexaan oo ay xurguf colaadeed kala dhaxeyso beesha Ogaden oo hadda hoggaanka u haysa maamulka Jubbaland.
Ciidamada dalka Kenya ee ku sugnaa xerada ayaa la sheegay ineysan difaac ku filan ka sameyn weerarkaas lagu xasuusay askarta badan kaasoo si weyn loogu cambaareeyey ururka Al-Shabaab.
Dowladda Kenya ayaa lagu dhaliilay in aysan shaacin xogta rasmiga ah ee ku saabsan askarta lagu dilay weerarkaas.